Maitiro ekuisa macOS Yakakwira Sierra yeruzhinji beta pane yedu Mac | Ndinobva mac
Uyu ndeimwe yemibvunzo iyo yatinowanzowana kana tangove neruzhinji beta vhezheni yakaburitswa uye nhasi Tichaona nhanho nedanho maitiro ekuisa iyo nyowani yeruzhinji beta vhezheni paMac yedu pasina kukuvadza yazvino vhezheni, ndiko kuti, kuburikidza nechikamu pa diski yedu.
Kune nzira dzinoverengeka dzekuisa idzi yeruzhinji beta vhezheni, asi akanakisa mune ese makesi uye mune edu ruzivo ndeye kusiya chikamu chemabheas uye usachiisa senge main operating system kudzivirira matambudziko anogona kuitika kana kukundikana uko beta inogona kuve nako.
Chinhu chekutanga tisati tatanga kupokana nemidziyo yedu ndeye gadzira backup. Izvi zvinogara zvakadaro uye izano rakanakisa ratinogona kupa kana tichizopokana nedisiki kunyangwe iri chikamu kana tikachiisa padhiziri rekunze, nezvimwewo, iyo backup inogara yakakosha kwazvo. Ipapo isu tinokwanisa kutanga nekurodha pasi yeruzhinji beta vhezheni yatichawana mu Peji re beta reApple.
Pane imwe nguva isu takapinda muApple webhusaiti zvinotikumbira kuti tinyore neApple ID uye kana tangonyoresa tinogona kuwana yeruzhinji beta shanduro. Isu tinopinda macOS High Sierra kubva pawebhu uye tinya pane kurodha pasi. Tichaona kuti kurodha pasi kunoitwa kuburikidza nefaira pane yedu Mac uye tobva tadzvanya pane iyi faira (simaki) kuitira kuti Mac App Store itange zvakananga nekutanga kurodha pasi, tinomirira kusvikira yapera uye ndizvozvo.
Iye zvino tave ne beta paMac yedu uye nekuimisa isu tinongofanirwa kutevera matanho atinopihwa neanosimudza, ari nyore uye kana tangopedza iyo Mac inotangazve.Kana ikangotikumbira isu dhizaini yekumisikidza tinofanirwa titi kuiisa muchikamu chakagadzirwa kana dhisiki rekunze ratakabatanidza neMac, tozoenda kubva kune imwe system kuenda kune imwe isu tinongofanirwa kushandisa chishandiso Sarudzo dzeSystem> Boot Disk uye shandura pakati peimwe neipi pese patinenge tichida (kare iwe unofanirwa kuvhura padlock mune yezasi kuruboshwe chikamu).
Iva pachena kuti Apple ichango gonesa maviri-chinhu chokwadi kana iwe ukafunga kuisa chero ye macOS High Sierra yeruzhinji betas sekusimbiswa naJavier Porcar mune ino chinyorwa. Iyi ndiyo imwe yemapoinzi ekufunga mune ino kuiswa, saka unoyambirwa.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Ndinobva mac » Mac Os X » macOS High Sierra » Maitiro ekuisa macOS Yakakwira Sierra yeruzhinji beta pane yedu Mac